Tratra ny Tanjona hoy ny Filoha : Lalana "Rocade" Andohatapenaka. - Madagascar Informations
18 novembre 2016 Madagascar Informations 1 Commentaire
Nohamafisiny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampihanina androany nandritra ny fitokanana ny lalana mihazo an’Andohatapenaka fa fotodrafitr’asa natao ho lovainy ny taranaka ny fotodrafitr’asa atsangana amin’izao fotoana izao androany no notokanana taminy fomba ofisialy ny zava-bita izay notronin’ireo olom-panjakana maro sy ireo olona nasaina.
Mirefy 4,759 km ny lalana ary manaraka ny fenitra iraisam-pirenena toa ny any Chine ,Addis Abbeba Ethiopie ,ary Senegal ny CRBC na ny China Road and Bridge Corporation no tompon’antoka taminy fanamboarana izao asa izao.
Mamorona asa maro ho an’ny mponina izao fananganana fotodrafitr’asa izao satria olona manodidina ny 5168 no nahazo asa.
← Inauguration de la Rocade d’Andohatapenaka construit par CRBC
Le Maroc arrive avec pleins d’intentions à Madagascar →
Lutte antiacridienne et le traitement des déchets : Deux infrastructures à Toliara
15 décembre 2016 Gasikara 0
Herinandrom-pirenena ho an’ny fampinonoan-dreny : Ho tanterahina manomboka ny 13 ka hatramin’ny 18 Aogositra izao
Une pensée sur “Tratra ny Tanjona hoy ny Filoha : Lalana “Rocade” Andohatapenaka.”
Informations MadagascarAuteur de l’article
Mipetaka amin’ny vody kiraro io Goudron io teo vao nafanain’ny masoandro a !